Ramangwana reMweya Serbia mushure meEtihad Airways yadambura airberlin neAlitalia?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Ramangwana reMweya Serbia mushure meEtihad Airways yadambura airberlin neAlitalia?
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • Serbia Kuputsa Nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Alitalia uye airberlin chikamu cheEtihad Airways Equity-Partner- Network. Etihad Airways yakaisa mari padyo nemabhiriyoni emadhora ekuchengetedza ndege dzese dzeItari neGerman dzichimhanya uye pakupedzisira vaifanira kukanda tauro uye vangatofanira kucheka kurasikirwa kwavo nekuidaidza mari yakaipa mushure mekunge ndege mbiri dzakamhan'arira kuchengetedzwa kwekubhuroka.
Imwe yakakurumbira kudyara kweUAE yenyika inotakura ndeMweya Serbia.
Mutauriri weAir Serbia akaudza eTN: "Zvakaitika muairberlin hazvichinje Air Serbia. Sezvambotaurwa kare, Hurumende yeRepublic of Serbia neEtihad Airways vakazvipira zvizere kuhukama hwekudyidzana neAir Serbia. Anotakura mureza wenyika atanga chirongwa chekubatanidza bhizinesi rayo, kudzikisa mitengo uye kuwedzera kushanda, mukupindura kushanduka kwemamiriro emusika. Kunyangwe paine matambudziko akakomba anotarisana neindasitiri yendege pasirese pasirese, chinzvimbo cheAir Serbia chinoramba chakadzikama Yedu yendege yenyika ndiyo inotungamira inotakura mudunhu iri ine netiweki dzendege dzinoshandira kwese kwese 42 kuenda kuEurope, Mediterranean, Middle East neNorth America, nevatakuri uye vekutakura zvinhu. "
Austrian Aviation.net yakashuma Etihad Airways yakatsigira chibvumirano neDarwin Airlines kare ikasundidzira mutakuri kuita mubatanidzwa neAdria Airways yakabatana.
Sekureva kweAustria Aviation piublication, veSerbia vezvenhau vakataura mari neEtihad yeAir Serbia yakanga yatochekwa uye matambudziko emutakuri weSerbia angave ave pedyo. Etihad ane 49%, hurumende yeSerbia ine 51% yeAir Serbia.
Sekureva kwenhau dzeSerbia, Etihad akatengesa Air Serbia zvikwereti zvinodhura. Panguva imwecheteyo, zvikwereti zvekare kubva kuJAT nguva zvakafukidzwa nevaSerbia vanobhadhara mutero. Muna 2016 Air Serbia yakagamuchira dzinosvika makumi mana emamiriyoni Euro kubva kuhurumende.
Nekudaro, zvese hurumende yeSerbia neAir Serbia vanoramba vakanyarara pahurongwa hwavo nemamiriro azvino.
Zvisinei izwi nderekuti, hapana chikonzero chekubhadhara chero mari kuAir Serbia sezvo ndege iri inobatsira.
Runyerekupe iyo Etihad equity shamwari network iri kudonha inogona kuramba iri nhema, asi zvese zvinoratidza kuti UAE Hurumende mari haichayerere zvakasununguka kuEtihad Airways kumanikidza mutakuri kudzikisa mari.
Parizvino ramangwana reMhepo Serbia rinotaridzika kupenya.